Dzima kana shandura zvinokurudzirwa ku "Kufema" pane yako Apple Watch | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inoiswa seimwe yeakakura zvigadzirwa zvemakore apfuura kuApple Uye ndosaka kuziva nguva dzose mashandiro uye zvazvinotipa kwakakosha kune vese avo vanoda kutenga imwe kana kuti vatove neiyi yeApple smart wachi pachiuno chavo.
Iyo yekufema sarudzo yeApple Watch inonakidza kune vedu isu vasina miniti yekutora iyo inodiwa kuzorora pakati pebasa, mhuri, kurovedza muviri uye mamwe mabasa ezuva nezuva, asi ko kana tiri vamwe vevaya vasingade kuyeuchidza isu cheichi chiito? Unoremadza sei kana kutogadzirisa chinofema?
Vhiki rapfuura iri takataura nezvazvo mhete uye uvhare ese Mukuyedza kwaApple kutiita kuti tione kuti mutambo wakanakira munhu wese, panguva ino chiito Kufema, chingasafarirwa nemunhu wese uye pane yakapusa nzira yekugadzirisa kana kunyange kuimisa. Kune izvi isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho.
Gadza kana kudzima zviyeuchidzo
Isu tinovhura iyo Apple Watch app pane yedu iPhone uye tinya pane iyo tebhu Wachi yangu
Tinodzvanya Kufema> Zviyeuchidzo kufema
Tinosarudza Hazvina kumboitika kana kakawanda sezvatinoda tiyeuchidze kufema uye voila
Kana chiyeuchidzo chichienderana nechiitiko chekarenda, senge musangano, uri kufamba kana kurovedza muviri, kana kuti watanga musangano uri wega, yako Apple Watch inogadzirisazve chiyeuchidzo. Iwe uchagamuchira chiyeuchidzo nguva pfupi chiitiko chapera kana paunomira kufamba kuti ugone kuzviita zvese panguva imwe chete
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Dzima kana shandura iyo "Kufema" inokurudzira pane yako Apple Watch
Mhoroi, patova neimwe tambo pane iyi nyaya pano,
Zviyeuchidzo zvakarongerwa kukuzivisa iwe hazvishande.
Zviyeuchidzo zveBREATH application zvinondikundikana, ini ndinoridza zviyeuchidzo zvitanhatu kana zvinomwe uye hazvindiyambire kamwe kana dzimwe nguva nenzira yekuseka. Ini handioni chikonzero, uye havagone kuchiwana muApple, pandakafona kuti ndizivise isu takaita bvunzo dzakawanda senge kutangazve wachi, kuchinja ruoko, kudzoreredza iyo iPhone wachi app, nezvimwe. Iyo iPhone neWatch software zvasvika pari zvino.
Mhinduro yekupedzisira kubva kuApple:
Mushure mekubvunza nyaya yako neinjiniya, vanosimbisa kuti iri dambudziko rinozivikanwa neApple uye kuti gadziriso irikugadzirirwa iyo inogona kugadzirisa dambudziko zvachose.
Nehurombo, hapasisina bvunzo dzatinogona kuita izvozvi, saka isu tichafanirwa kumirira.
"Zvisinei, ndichaenderera mberi ndichiteerera kune chero nhau nezvenyaya iyi uye ndichakuzivisai nekukurumidza sezvandinogona."
Mhoro zvakare, tichaona kana zuro wachiOSOS 4.2.3 kugadzirisa inogadzirisa dambudziko kana isu tinofanirwa kumirira watchOS 4.3.
Zvakanaka, zviyeuchidzo zvinopfuurira kusashanda. Mumazuva mana aya ndaive nezvirangaridzo zvezuva nezuva zvitanhatu zvakarongwa kana kuiswa mucherechedzo uye havana kundiudza nezve chero.
Ndinoyeuka: iPhone 8 ine ios 11.2.6 uye Tarisa nhevedzano 3 neWatchOS 4.2.3
Tichafanirwa kumirira WatchOS 4.3 ???